Nick Carter Zvinyorwa pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Nick carter
Madiki Madhiri Mabhizinesi Anoshandisa Software Kugona Nhare
Svondo, Ndira 1, 2012 Svondo, Ndira 1, 2012 Nick carter
Iine anopfuura makumi mapfumbamwe muzana emabhizimusi madiki anoshandisa imwe dhijitari fomu yedata manejimendi kuchengetedza vanobatana, zvinoita sezviri pachena kuti mabhizinesi madiki akapinda munguva yeadhijitari. Asi, isu taida kuziva kuti mabhizinesi madiki aya ari kuitei nedata rekubata. Zvatakawana zvingakushamisa iwe. Iwe unogona kuwana iyo yakazara ongororo mhedzisiro kuKeroTwo University.
Chishanu, December 16, 2011 Nick carter
Kubvira pandakatora @ kyleplacy's uye @ edeckers bhuku "Kuzvishambadza" Ndakatanga kechipiri kufungidzira sarudzo yandakaita pakutanga kweangu mudiki tech tekiniki-kutanga. Makore apfuura, ini ndakagadzira munhu anonzi Addy. Aive chinhu che software, asi kupfuura izvozvo, ndiye ainyanya kushandira maoko kune vatengi vedu. Chinangwa changu chaive chekuti vanhu vabatanidze iye munhu neAdressTwo zvakanyanya kusimba pane yangu. Zvakashanda. Uye nhasi, ini
Ndoziva kuti ini zvimwe ndinobata imwe flack yeizvi, asi ini handisi Mac fan. Ok, ini ndiri pachena kuti handigoni kumira navo. Ini handikwanise kuisa munwe wangu pachikonzero nei, asi heino mavambo: kuti ugadzire App yeiyo inokudzwa iPhone, unofanirwa kukura chete paMac neMac software -investment inodarika $ 2,000. Zvakangodaro, iyo iPhone inoshandura musika uye svikiro rekushambadzira iro rinofanirwa kupihwa nemabhizinesi. Saka iwe
Chipiri, July 5, 2011 Svondo, Gunyana 30, 2012 Nick carter
Ndiri kutya kuti handina ruzivo rutsva rwekugovana nevaverengi ve Martech Zone, kungokumbira rubatsiro rwako. Mushure mekuona vhidhiyo iripazasi, ndokumbirawo kana: Ndiudze kana paine basa-kutenderedza kune izvi zvandisina kupotsa, kana… Retweet iyi mamiriro ekugadzirisa kusvikira minwe yako yabuda ropa kuitira kuti iite kuti mumwe munhu atarise paFacebook. [youtube: http: //www.youtube.com/watch? v = 5G-90bZXVjw]
Maitiro Ekutora Iyo Nyowani Webhusaiti Yakatsikwa neGoogle Mangwana
Chipiri, June 28, 2011 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Nick carter
Munguva pfupi yapfuura, ndanga ndichitangisa akawanda mawebhusaiti matsva. Sezvo KeroTwo yakura uye nguva yangu yasununguka, zvakagadzirwa dutu rakakwana remazano matsva uye nguva yemahara yekuita, saka ndatenga madomendi madomasi ndikashandisa micro-saiti kuruboshwe uye kurudyi. Ehe, ini handina moyo murefu, futi. Ndine zano neMuvhuro, rivake neChipiri, uye ndinoda traffic neChitatu. Asi zvinogona kutora mazuva kana mavhiki pamberi peangu nyowani